Maninona no manjaka tampoka ny atiny ateraky ny mpampiasa, amin'ny vanim-potoanan'ny haino aman-jery sosialy
Alahady 5 Febroary 2017 Alahady 5 Febroary 2017 Corey Bloom
Tena mahavariana tokoa ny mahita ny fivoaran'ny teknolojia tao anatin'ny fotoana fohy. Elaela ny andron'ny Napster, MySpace, ary ny AOL dial-up manjaka amin'ny tsena an-tserasera. Androany, manjaka eo amin'ny tontolon'ny nomerika ny sehatra media sosialy. Avy amin'ny Facebook ka hatramin'ny Instagram ka hatrany amin'ny Pinterest, ireo fampitaovana ara-tsosialy ireo dia nanjary singa lehibe amin'ny fianantsika andavanandro. Aza mitady lavitra mihoatra ny fotoana lanintsika amin'ny media sosialy isan'andro. Araka an'i Stastista,